Loltoonni Liyyuu fii Federaalaa uummata aanaa Moyaalee irratti Lola bananiiru - Gaachana Sabaa
Loltoonni Liyyuu poolisii fii Federaalaa wal tahuudhaan gosoota Oromoo kibba Oromiyaa aanaa Moyyaalee keessa jiraatan keessaa Booranaa fii Garrii walitti buusuun lolli guddaan godhamaa akka jiru odeeffannoon achi irraa nu gahe nii ibsa.
Lolli kunis qaama waraana mootummaa Itoophiyaa lamaan akka durfamaa jiru ragaan lola sana irraa argame nii ibsa.Lola kana geggeessuuf gosa irratti maxxanuun isaanii ammoo lolli kun lola gosaaf gosaati jechuuf jedhanii bu’aa siyaasaa buufachuuf isaan gargaara.
Qaamoonni loltoota Mootummaa Itoophiyaa kun lamaan ajjeechaa ilmaan Oromoo nagaa irratti yeroo baay’ee tahaa tureef kan adda durummaan kan itti gaafatama fudhatan yoo tahu ammas akkuma barame gosa Oromoo Garrii qabachuu dhaan lola uummata nagaa Booranaa irratti bananiin namni hedduu du’uu isaa ibsaniiru.
Haatahuu malee gargaarsa tokko malee uummanni Oromoo Booranaa lola irratti baname kana funnanitti fuudhee dabruun deebii barbaachisu godhanii loltoota gamasii ajjeefaman keessaa adda baasuuf yeroo waraqaa eenyummaa isaanii ilaalan waraqaa eenyummaa poolisii federaalaa fii Liyyuu Poolisii hedduu akka argatan namoonni ijaan argan himaniiru.
Lola kanaan dura tahe irrattis waraannii biyyoolessa Somaaliyaas hirmaachuu isaanii ragaan mirkaneeffameera.
Wayyaaneenis aarii kana irraa kan ka’e Waraana ishee uummata nagaa Moyyaalee ganda keessa deemuun sodaachisuu fii tumuu irratti kan bobbaa’e yoo tahuu gama Keeniyaas osoo hin hafne akka daangaa ce’uun uummata rakkisaa jiran jiraattoonni aanaa Moyyaalee himaniiru.
Jiraattoonni Magaala Moyyaalee Keeniyaa akka jedhanitti Sodaan gama Itoophiyaa jiru gama isaaniis nii jiraa jedhu.Mootummaan Keeniyaas irraa dhoowwuu akka hin dandeenye akkas jechuun ibsan “wanti Mootummaan nurraa dhoowwee beeku tokkolleen hin jiru,warri Itoophiyaa akkuma fedhan ganda kee deemuu namni isaanittillee dubbachuu danda’u hin jiru” jedhu.
Kanaan Duras Waraanni Itoophiyaa daangaa cehuun uummata nagaa biyya namaa irratti tarkaanfii ajjeechaa fii ukkaamsaa garagaraa akka fudhachaa turuun beekamaa dha.Wayyaaneen biyya keessatti qofa osoo hin taane gosoota Oromoo walitti buusuu fii Oromoo saboota biroo biyya keessaa fii alaa waliin dhahuun bu’aa siyaasaa buufachaa akka turte ammas akka itti jirtu beekamaa dha.
Gama kanaan laafinni biyyoota oollaas tahe qoodni Liyyuu Poolisiin taphachaa jiru guddaadha.
Akka faanni mootummaa Itoophiyaa mul’isutti jarri TPLF kun baha Afrikatti rakkina guddaa uumuuf socho’aa waan jiran fakkaata.Al Shabab ergaa AMISOM’n laaffatee booda jarri kun dhaabbata shororkeessaa biroo uumuuf yaalaa jiru.
Kanaafuu uummata hiraarsuun nageenya dhoowwanii akka uummanni gochaa hamaa irratti bobba’anii fii lola guutuu banuuf sababa tahan godhuu akkasumas yoo irratti beekkame ammoo Ofumaa shororkeessaa tahuu dha.
Wayyaaneen uummatni biyyattii amantii Islaamaa hordofeef akkuma biyya birootti tahaa jiru uummanni kunis roorroo irraa kan ka’e waan boombiin of balleessinu itti fakkatee qaajjii irra jirti.
Gama biraatiin Liyyuu Poolisiin uummata Oromoo ajjeeseef waan Oromoon garagalee uummata nagaa Somaalee irratti lola banu itti fakkaate.Oromoon fagoo hubate,diina keenya addaan baasneerra sunis TPLF qofa.
Wanti wayyaanee fii ergamtoonni isaanii kan akka Liyyuu Poolisii hubachuu qaban Lolli isaan lola daangaa fii gosaa jedhanii labsuuf deeman kun uummattoota Oromoo fii Somaalee gidduutti akka isaan yaadanitti fudhatamuu hin dandeenye,Yoomiyyuu akkasittis hin fudhatamu.Garuu lola qa’ee dhufe ofirraa qoluun hammeenya hin qabu.
Gochi kun har’a bal’inaan itti beekamu illee sabootaa fii gosootni gariin hanqina hubannaa siyaasaa irraa kan ka’e dammaqiinsa barbaachisu godhuu hin dandeenye.Yeroo ammaa kana keessatti lammiin biyyattii hundi waliigalee nyaapa waloo hiddaa buqqisuu male.
← Partiin Angoo irra jiru Mugabe misensummaa isaa irraa mulqan.
President Robert Mugabe resigns, ending 37 year rule →